Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Canada machibidoro ụgbọ elu ndị njem niile si Morocco
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Dabere na ndụmọdụ ahụike ọha kachasị ọhụrụ sitere na Healthlọ Ọrụ Ahụ Ike Ọha nke Canada, Transport Canada na -enye ọkwa maka Airmen na -egbochi ụgbọ elu azụmahịa na nkeonwe ọ bụla na -aga Canada site na Morocco site na August 29, 2021 ruo Septemba 29, 2021.
Transport Canada na -amachibido njem ụgbọ elu azụmahịa na nkeonwe ọ bụla na -aga Canada site na Morocco.
Mmachibido iwu ụgbọ elu Morocco na -amalite site na Ọgọst 29 ruo Septemba 29.
A dụrụ ndị Canada ọdụ ka ha zere njem ọ bụla na-adịghị mkpa na mpụga Canada
Canada nwere ụfọdụ njem siri ike na oke oke ụwa, ma na-ebute ahụike na nchekwa nke ndị Canada ụzọ site na ịga n'ihu na-ewere ụzọ dabere n'ihe egwu na ịtụle iji mepee ókèala ya.
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ na nzaghachi COVID-19 nke Canada, usoro ókèala dabere na data dị, ihe akaebe sayensị na nleba anya nke ọnọdụ ọrịa ma na Canada ma na mba ụwa. A hụwo mmụba nke nsonaazụ nnwale COVID-19 dị mma na ndị njem si Morocco na-abata Canada n'ime ọnwa gara aga.
Dabere na ndụmọdụ ahụike ọha ọhụrụ sitere na Healthlọ Ọrụ Ahụ Ike Ọha nke Canada, Ụgbọ njem Canada na -enye ọkwa maka Airmen (NOTAM) na -amachibido njem ụgbọ elu azụmahịa na nkeonwe ọ bụla na -aga Canada site na Morocco site na Ọgọst 29, 2021, na 00:01 EDT ruo Septemba 29, 2021, na 00:00 EDT. Ụgbọ njem azụmahịa na nkeonwe ọ bụla na -aga Canada si Morocco nọ n'okpuru NOTAM. Ọrụ ibu naanị, nnyefe ahụike ma ọ bụ ụgbọ elu ndị agha anaghị etinye.
Iji hụ na nchekwa ụgbọ elu na ibelata nkwụsị ọrụ, a ga -ahapụ ụgbọ elu si Morocco na -ebufe n'oge mbipụta nke NOTAM ịga Canada. Dị ka obere oge, ruo mgbe NOTAM ga -amalite, ndị njem niile bịarutere n'ụgbọ elu ndị a ga -achọ ịnwale ule mgbe ha rutere Canada.
Transport Canada na-emezigharị iwu nwa oge na-asọpụrụ ụfọdụ ihe achọrọ maka ụgbọ elu ụgbọ elu n'ihi COVID-19, metụtara nnwale ụmụ irighiri COVID-19 tupu ọpụpụ mba atọ iji tinye ndị njem si Canada site na Morocco site na ụzọ na-adịghị. Nke a pụtara na ndị njem na-ahapụ Morocco gaa Canada, site n'ụzọ na-apụtachaghị ìhè, ga-achọ inweta nnwale tupu ọpụpụ COVID-19 site na mba nke atọ-na-abụghị Morocco-tupu ịga n'ihu njem ha na Canada. Ihe nyocha nke obodo nke atọ ga-amalitekwa na Ọgọst 29, 2021, na 00:01 EDT.
Canada na -aga n'ihu na -enyocha ọnọdụ ahụ nke ọma, na ya na gọọmentị Morocco na ndị na -arụ ọrụ ụgbọ elu ga -arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na etinyere usoro kwesịrị ekwesị iji mee ka ịmaliteghachi ụgbọ elu na -aga n'ihu ozugbo ọnọdụ kwere.
Amachibido ụgbọ elu site na mba ndị metụtara bụ akụkụ nke usoro izugbe Canada maka njikwa ọrụ dị irè nke atụmatụ mmeghe nke ókèala Canada.
A dụrụ ndị Canada ọdụ ka ha zere njem na-adịghị mkpa na mpụga Canada-njem mba ofesi na-abawanye ohere nke ikpughe, yana mgbasa nke COVID-19 na ụdị ya. A na -agbanwekwa usoro ókèala ka ọnọdụ ọrịa na -agbanwe.